China PVC / WPC Furo Bhodhi Dhizaini Line Mugadziri uye Mutengesi | Yakachengetwa
Muenzaniso Nha.: WPCFB-C80, WPCFB-C80 + 65
* Iyi nhevedzano yePVC / WPC Foam Board inogadzira mutsetse yakagadzirirwa hunyanzvi kugadzira iyo PVC uye WPC Panel neBhodi
Iyo PVC / WPC Furo Bhodhi Kugadzira Line
Iyi PVC / WPC Foam Board inogadzira mutsetse inoshandiswa kugadzira yekushongedza bhodhi rekicheni kabhineti, fenicha bhodhi, imba yekugezera bhodhi, kuvaka template, kuvaka bhodhi, WPC yemukati flooring substrate, bhiribhodi, zvichingodaro.
Iyo furo bhodhi imhando yePVC furo bhodhi kana WPC furo bhodhi. Iko kune laminated firimu kana pepa pane yekutanga rukoko sekushongedza pamusoro.
ine yakakwira density foam PVC furo kana WPC furo bhodhi iri pakati, iyo inosarudzwa seiyo substrate yekusimbisa iyo inobata simba.
Nekuda kwayo yakanakisa base base material performance, mukuwedzera kune akasiyana lamination zvinhu uye anochinjika & akasiyana dhizaini sarudzo, iro bhodhi rinonyanya kushandiswa mufanicha indasitiri uye yakanaka chinotsiva chigadzirwa kune echinyakare huni bhodhi.
Inogona kuvezwa nyore, yakadhonzwa, yakarohwa, yakasungwa jecha, yakaboorwa, yakapetwa, yakarovererwa, yakasungirirwa, kana yakasungwa.
Iyo yekuwedzera kubatsirwa kwezvinhu inyoro-chiratidzo, isina mvura,
Muchina kutaurwa & technical data:
Iyo PVC WPC furo bhodhi / pasi substrate yekugadzira tambo inoumbwa neye extruder, chakuvhuvhu, furo bhodhi yekumisikidza muchina, zvakasikwa kutonhodza system, tarakita, chizvarwa chitsva cheakarurama kugadzirisa otomatiki akagadzika-kureba yekucheka muchina (frequency kutendeuka kumhanya kudzora), otomatiki apedza chigadzirwa kubuda chikuva, uye trolley yekufambisa
ukobvu: 2mm - 12mm
saizi: 970mm x 2000mm kana 1220x2440mm
* Iwo ane simba mapatya sikuruu epurasitiki extruder muchina anga akagadziridzwa, iyo yakakwira plasticzation kugona kwekusanganisa zvinhu, inovimbisa kufanana kwepurasitiki kunyauka.
* iine kugona kukuru kwekuburitsa, panguva ino, izvo zvinhu zvakare zvakagadzikana.
* Kunyanya maererano nekudzikama kweiyo inopupuma coefficient, yakasarudzika otomatiki yekudzivirira nzira inogamuchirwa kudzikamisa huremu hwebhodhi rimwe nerimwe.
* Gamuchira rakasarudzika guruva uye sawdust otomatiki yekuunganidza chishandiso kudzora kusvibiswa kwese mutsara weguruva kumusangano, zvichitungamira indasitiri kuti iite musangano wekunze wakachena.
* Kugadziriswa kwekugadzirisa kwehuremu hwetepa nehupamhi hwehupfeko mhando yerudzi rwevhu.
* Iyo ± 1 ℃ chaiyo tembiricha yekudzora yeiyo plasticization maitiro, ukobvu uye wakatsetseka pamusoro.
* Ose nzira controll yekukora kwesheet kunyatso kugadzirisa sikuru kana kumanikidza kwemafuta.
* Kaviri chiuno kutonhora uye chakuvhe tembiricha controller inogamuchirwa.
* Precision yekucheka muchina yekupa yakagadzikana uye chaiyo yekucheka kwehurefu.
Kugadzirwa kwekutengesa (KGS / awa)
PVC + CaCO3 / PVC + WOOD upfu + CaCO3
PVC Kuteedzera Marble Sheet Chigadzirwa Chigadziko
Chokutanga Layer Laminated firimu
Chidimbu Chechipiri Yakakwira density PVC furo
Chidimbu Chechitatu Kushongedza firimu
Iyo PVC WPC Foam bhodhi yekugadzira mutsetse inonziwo WPC Flooring kugadzira mutsetse / Plastic fenicha bhodhi yekugadzira mutsetse / kuvaka template yekugadzira tambo, kuvaka bhodhi kugadzira mutsetse.
Chinhu chikuru, epurasitiki extruder, yakagadzirirwa kuwanikwa yeConcial Twin Screw plastiki extruder ine poda yakasimba kunze.
Iyo Twin Screw Plastiki Extruder muchina zvakare iri hombe unit yemuchina wekugadzira wekugadzira PVC PIPE, PVC mbiri uye nezvimwe.
Muchina wedu mutsara une yakakwira mwero yekudzoka pane investment uye vanogona kuzvibhadharira ivo pachavo nekukurumidza.
Se makore makumi maviri ekutsanangudza fekitori, tinogona kupa vatengi hunyanzvi hwekugadzira suport uye zvakare rutsigiro kubva kune yakasvibirira fomura, yekugadzira maitiro ekuumba michina.
Pashure: PVC kutevedzera Marble Sheet Kugadzira mutsetse
Zvadaro: EIR Pamhepo SPC Floor Kugadzira Mutsetse Wakatarwa mhando
Isu tinofara kuva nezano rako pachako:
Iyo Twin sikurui Extruder Muchina
EIR Pamhepo SPC Floor Kugadzira Mutsetse Wakatarwa mhando
Imwechete Screw Extruder Machine
PVC Kuteedzera Marble Mbiri Yekugadzira Line
PVC Wall Ceiling Door Hollow Panel Kugadzira Line
PVC Mbiri Yekugadzira Line